Wasiirro ka tirsan Dawlad-deegaanka DDSI oo Borama Gaadhay | Berberanews.com
Home WARARKA Wasiirro ka tirsan Dawlad-deegaanka DDSI oo Borama Gaadhay
Wasiirro ka tirsan Dawlad-deegaanka DDSI oo Borama Gaadhay
Borama-(Berberanews)-Wefti wasiirro iyo masuulliyiin kale isugu jira oo ka socda dawlad-deegaanka Somalida Itoobiya, ayaa maanta gaadhay magaalada Borama ee Gobolka Awdal.
Maamulka Gobolka Awdal iyo degmada Borama, ayaa weftiga ku soo dhaweeyay magaalada.
Tiimbaro badhasabka Awdal
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Maxamed Axmed Adan Tiimbaro, oo ka hadlay soo dhawaynta weftigan, ayaa yidhi,
“Wefti uu hoggaaminayo Wasiirka maalgashiga, qurbojooga iyo Maaliyadda ee dawlad-deegaanka Somalida Itoobiya Cabdisalaan Yuusuf Maxamuud, waxaan leeyahay wasiir kusoo dhawada Gobolka Awdal, waa gobolkiinii oo nin laba xaas leh uun baad iska noqonaysa markaad halka (Borama) timaado iyo markaad halkaa (Jigjiga) tagto. Kolay kulamadeenu joogtay noqonaynlaan hawlaha nabadgelyada iyo horumarka inan marwalba ka wada shaqayno aya loo baahanyahay maadaama aynu isku dad nahay.”
Wasiirka maalgashiga, qurbojooga iyo Maaliyadda ee dawlad-deegaanka Somalida Itoobiya Cabdisalaan Yuusuf Maxamuud, ayaa uga mahadceliyay maamulka Gobolka iyo degmadu sida ay u soo dhaweeyeen weftigan.
“Maanta waxaannu kulan shaqo u soo gaadhnay Gobolka Awdal, waxaan asd uga mahadcelinaya sida ay maayarka magaalada iyo Badhasaabka Gobolku noo soo dhaweeyeen.”
Wasiirku wuxuu ka hadlay ujeedada socdaalkooda, waxaannu yidhi, “Socdaalkayagan oo mid shaqo ahaa oo aanu kulamo la yeelanayno maamulka Gobolka Awdal, gaar ahaan degmooyinka xuduudku la wadaago Gobolka Faafan.
Previous articleAlla ha u Naxatiistee waxaa goor dhawayd geeriyooday Suldaan Indhacase
Next articleMadaxweyne Biixi oo ka hadlay Shakhsiyadii Marxuum Suldaan Indhacase